Firefox နှင့် ဇော်ဂျီ ပြဿနာ..Firefox တွင်မြန်မာစာမြင်အောင်လုပ်နည်း - ဖုန်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူး..ဒါပေမဲ့..ဆိုင်နေတယ်.. :D ~ ITmanHOME
10:52 MM Font Keyboard Error များအတွက်, phone, နည်းပညာ No comments
Firefox နှင့် ဇော်ဂျီ ပြဿနာ..Firefox တွင်မြန်မာစာမြင်အောင်လုပ်နည်း - ဖုန်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူး..ဒါပေမဲ့..ဆိုင်နေတယ်.. :D
Firefox နှင့် ဇော်ဂျီ ပြဿနာ..
Firefox မှာ မြန်မာဖောင့် အလုပ်မလုပ်ဘူး ဆိုတဲ့လူတွေ အတွက်ပါ
ကဲ့…စလိုက်ကြစို့..အရင်ဆုံး Control panel ထဲကိုသွားမယ်
အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Region and language ကိုကလစ်
Formats ကိုကလစ်ပြီးရင် Format: အကွက်ထဲမှာ English (United states) ကိုပြောင်းပေးလိုက်
နောက်တစ်ဆင့် ဒုတိယ မြောက် location ကိုကလစ်…
Current location: မှာလဲ United states ကိုပြောင်း..ပြီးရင် OK
နောက်တစ်ဆင့်… အောက်ကပုံထဲအတိုင်း Control panel ထဲကိုသွားမယ် Internet Options ကိုကလစ်
ဘောက်တစ်ခုကျလာမယ်…General အောက်ဆုံးနားက Font ကိုကလစ် ဘောက်တစ်ခုထပ်ကျလာမယ်.. Webpage font: အကွက်မှာ Zawgyi-One ကိုရွေးပေးလိုက်ပြီးရင် OK ပေါ့..ကဲ့..ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မမြင်ရတဲ့မြန်မာစာတွေမြင်လာပြီမဟုတ်လား..(ဂျီတော့ခ်မှာမြန်မာစာအတုံးအတုံးလေးဖြစ်နေရင်လဲဒီနည်းနဲ့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်…)
ဒါကဒုတိယနည်း…. (မကောင်းတာသင်ပေးတော့မယ် :D )
Control panel ကိုသွား ပုံထဲကအတိုင်းပဲ.. Programs and Featrues ကိုကလစ်..
မြန်မာစာအလုပ်မလုပ်ချင်တော့တဲ့ Mozilla Firefox 14.0.1 ကို Right Click ခေါက် .. Uninstall ကို ကလစ်ပြီးပို့ပလိုက်.. :D
Next ကိုကလစ်ပေါ့ဗျာ..ဆက်တိုက်တဲ့..ပို့ပစ်လိုက်ဗျာ…. ပြီးပြီးလား…ပြီးရင်….
ဒီအောက်ကလင့်ကို ကော်P ကူးပြီး Broswer address ထဲကို paste..=> Enter ခေါက် - (or) မကူးချင်ရင်..ကီးဘုတ်ပေါ်က Ctrl ကီးကိုဖိပြီး အောက်ကလင့်ပေါ်ကိုကလစ်တစ်ချက်ပေး..
တစ်နှစ်သုံးလေးပြေးနေမယ်..ခဏစောင့်လိုက်…အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း SKIP AD ဆိုတဲ့စာတန်းပေါ်လာမယ်..အဲဒီအ၀ါပေါ်ကို
အောက်မှာ request download ticket ဆိုတဲ့စာတန်းပေါ်လာမယ်..အဲဒီအပေါ်ကိုကလစ်လိုက်….
ဒေါင်းလုဂ်…လုပ်ဖို့ဘောက်ကျလာမယ်..Internet download Manager ထဲထားမှသာလျင်ပေါ်မည်..ထည့်မထားလျင် Save box ပေါ်မယ်..Save ကိုနှိပ်ပါ…
ပြီးသွားရင်… ပုံထဲကအတိုင်းပဲ… Open ကိုနှိပ်ပါ…
ကဲ့…ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့…မြင်ပြီလား…မြန်မာဖောင့်နဲ့ရေးထားတာနောက်ဆုံးအဆင့်.. ဘယ်ဘက်ဒေါင့်က Firefox ဆိုတဲ့နေရာမှာ
Options ဘောက်ထဲမှာ ညာဘက်ဒေါင့်ထိပ်မှာရှိတဲ့ Advanced ကိုနှိပ်.. Update ကိုနှိပ်..Never Check for updates မှာတစ်ချက်ကလစ်.. OK… ဒါဆိုရပြီ..အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်???
Firefox 12.0 ရဲ့အထက် firefox version များမှာ ဇော်ဂျီဖြင့်ရေးထားသည့် မြန်မာစာ လက်ကွက်များကို Chat box ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Header နာမည်ဖြစ်ဖြစ် လေးထောင့်တုံးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အခုနောက်ထွက်မည့် version များသည့် window 8 အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး version မြှင့်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်မပြေ ဖြစ်သွားတာပါ။
ပတ်စနာပဲ...ဒီမှာပုံလဲအပေါ်ဝူးရော...ခွကျပီရော...ကဲ..ထူးပါဘူး..ဒီအောက်လင့်မှာ Doc နဲ့ pdf ဖိုင်တင်ထားပေးတယ် သွားပြီးသာဒေါင်းပြီးကြည့်လိုက်ဗျာ.. ဟီးးးးး...
ပတ်တနာပဲ.. အဟီး... Microsoft နဲ့ရေးထားပြီး..ဒီနေရာမှာ Paste လုပ်လိုက်တော့ ပုံတွေမမြင်ရတော့ဘူး..ကဲ့..ထူးပါဘူး...အောက်က... Doc File နဲ့ pdf ဖိုင်ကိုပဲ ကြိုက်ရာဒေါင်းပြီးကြည့်ပေတော့ဗျာ..ဟီးးးးးး....
1. ဒေါင်းလုဂ် Doc
2. ဒေါင်းလုဂ် Doc
1. ဒေါင်းလုဂ် pdf
2. ဒေါင်းလုဂ် pdf
Download Good Link
Posted by Ven.Khe